शिक्षकहरुको साथ र सहयोगले अंग्रेजी राम्रो भयो - Balbatika
शिक्षकहरुको साथ र सहयोगले अंग्रेजी राम्रो भयो
Balbatika Nepal9Jan 2018
शंकर इन्टरनेशनल इङ्लिस स्कुल
शंकर स्कुल नै किन रोज्यौ त ?
यो स्कुलमा मैले ३ कक्षाबाट पढ्न सुरु गरेँ । बुवाआमालाई राम्रो लागेर मलाई यो स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भएको हो ।
स्कुलमा अहिलेसम्मको तिमो अनुभव कस्तो भयो ?
म सरकारी स्कुलबाट यहाँ पढ्न आएकी हुँ । अङ्ग्रेजी भाषा राम्रोसँग बोल्न र लेख्न आउँदैनथ्यो । शिक्षकहरूकोे साथ र सहयोगले अङ्ग्रेजीमा राम्रो प्रगति गर्न सकेँ । स्कुलको पढाउने वातावरण पनि व्यवस्थित छ, यहाँ थुप्रै क्रियाकलापहरू पनि गराउने गरिन्छ । शिक्षकहरूको हेरचाह गर्ने बानी मलाई एकदमै मनपर्छ ।
यो स्कुलमा के कस्ता अतिरिक्ति क्रियाकलापहरू गराइन्छ ?
कक्षा ५ देखि ९ सम्म प्रत्येक शुक्रबार पत्रपत्रिकाको समाचार पढेर सुनाउनुहुन्छ र पढ्न समेत लगाउनुहुन्छ । साथै शुक्रबार परियोजना कार्यहरू पनि दिनुहुन्छ । उत्कृष्ट परियोजना कार्य गर्नेलाई अभिभावक दिवसको दिन पुरस्कार वितरण पनि गरिन्छ । त्यस्तै खेलकुदमा पनि हाम्रो स्कुल अग्र स्थानमा नै रहेको छ ।
तिम्रो विचारमा विद्यार्थी जीवनमा कोर्ष बाहेकका अन्य किताब पढ्नु कत्तिको जरुरी छ ?
एकदमै जरुरी छ । म आफैँ पनि बाहिरी किताब पढ्छु । विद्यार्थी जीवनमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । किताब विना विद्यार्थीको जीवन महत्वहीन हुन्छ । किताब यस्तो वस्तु हो, जसले गर्दा हामी राम्रो र असल मान्छे बन्न सक्छौँ । हरेक क्षेत्रका मानिसहरूको लागि आवश्यक छ ।
तिम्रो विचारमा शकंर स्कुलको मुख्य विशेषता के हो ?
गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक शिक्षा यो स्कुलको पहिलो विशेषता हो । त्यस्तै छात्राहरूलाई पनि छात्र सरह बनाउन विभिन्न खेलहरूमा सहभागी गराउनु यो स्कुलको अर्को मुख्य विशेषता हो ।